S&P 500 ၏ခွေးများ - ခိုင်မာသောသမိုင်းဝင်စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ၀ င်ငွေ ၄.၅% အထက် - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B4.5B စျေးကွက်သတင်း
အောက်တိုဘာလ 17, 2019 ဇူလိုင်လ 16, 2020 S & P 500 ၏ခွေးများ ဘ‌‌လော့ခ်, ငွေချေးစာချုပ်များ, စီးပွားရေး, Corporate Bonds, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, အဆိုပါ Dow 2020 ၏ခွေး, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အသားပေးသတင်းများ, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ဝင်ငွေ Aristocrats, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
တစ်နှစ်မှသုံးရက်အထိ 20.38% ပြန်လာ
နှစ်စဉ်တစ်သက်တာ 10.41% ပြန်လာ
(စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးသည် 10-15-19 ၏အခကြေးငွေနှင့်မကိုက်ညီပါ)
Durig ရဲ့ S & P 500 အစုစု၏ခွေးများ အမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်းအချို့အပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအာရုံစိုက် အပြာရောင်ချစ်ပ် အပေါ်စာရင်းခွဲဝေထိတ် S&P 500။ အစုစုတွင်လက်ရှိပျမ်းမျှအမြတ်အစွန်း ၄.၅% ကျော်အထွက်နှုန်းပါရှိသည် - အမြတ်အစွန်းဝင်ငွေအတွက် 4.5% ကျော်ဆိုလိုတာကနှစ်စဉ်သင်၏အစုစုသို့စီးဆင်း။
နှစ်စဉ်မြတ်များ ၀ င်ငွေ၏ 4.5% ကျော်အပြင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခွဲဝေရရှိသော ၀ င်ငွေများအနေဖြင့်လည်းအစုရှယ်ယာများသည်စျေးနှုန်းအတက်အကျများ၌ထိန်းသိမ်းထားပါကသိသာထင်ရှားသည့်တိုးတက်မှုအလားအလာရှိသည်။ ၀ င်ငွေနှင့်ဝင်ငွေနှင့်စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးမြင့်တက်လာမှုတို့ကိုသင်မည်သို့စိတ်ကူးနိုင်မည်ကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးရန်အစုစုသည်အကျိုးအမြတ်များစွာကိုရရှိခဲ့သည် တစ်နှစ်မှသုံးရက်အထိ 20.38% ပြန်လာ.
ဒါကိုတော့မေးခွန်းထုတ်စရာမရှိပါ 2018 သည်စတော့ဈေးကွက်အတွက်အကြမ်းအားဖြင့်နှစ်ဖြစ်သည်တကယ်တော့လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးသောနှစ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း Durig's Dogs of S&P 10 Portfolio သည်၎င်း၏အနီးဆုံးအခြေခံစံနှုန်းများထက်ဂဏန်းနှစ်လုံးထပ်ပေါင်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ဒီလမ်းကြောင်းကိုဆက်သွားမယ်လို့အာမခံချက်မရှိပေမဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်အောင်နိုင်မှုရှိတဲ့ဘဏ္inာရေးဈေးကွက်မှာ 2018 ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာဒီထူးခြားတဲ့မဟာဗျူဟာရဲ့ထိရောက်မှုကိုအတည်ပြုဖို့သေချာပါတယ်။
ဒါကြောင့် S&P 500 Durigs Dogs ကဒီမတည်ငြိမ်တဲ့ကာလမှာ ၆% ကျော်ကျော်လွန်ပြီးအနီးဆုံးအခြေခံစံနှုန်းကိုကျော်လွန်အောင်ဘာကခွင့်ပြုခဲ့တာလဲ။
Durig ရဲ့အစုစုကိုတစ်ရှိပါတယ် 0.72 ၏ Beta ကို (S & P ကို ​​500 vs), ဆိုလိုတာကသီအိုရီအရ S&P 0.72 အတွေ့အကြုံတိုင်း ၁% တိုးတိုင်း ၀.၇၂% တိုးတက်လိမ့်မယ်။ ဒါ အနိမ့်ဆက်စပ်မှုနှင့် beta ကို စျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုကိုဆန့်ကျင်။ ကာကွယ်ပေးသည် ယနေ့မှားယွင်းနေသောဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ချောမွေ့လွယ်ကူပြီးပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောစီးနင်းခြင်းကိုဖန်တီးပါ.
နှင့် ယူအက်စ်ဘဏ္andာရေးနှင့်ဘဏ်နှုန်းများသည်ယခုအချိန်တွင်အလျှော့ပေးလိုက်လျောမှုနည်းပါးနေသည် (US အတွက် 1.58%2YR ဘဏ္asာရေးနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာအတွက် 1.75% 10 YR ဘဏ္asာရေး) များစွာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတောင်းဆိုနေကြသည် ဝင်ငွေရနေစဉ်လျောက်ပတ်သောအမြတ်အစွန်းရရှိနိုင်သောအရည်အသွေးမြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ နှစ်နှင့်နှစ်များစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ။
Durig's Dogs မှ S&P 500 သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးမြင့်အပြာရောင် Chip Dividend Stocks ။
Durig ၏အစုစုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အပြာရောင်ချစ်ပ်ခွဲဝေမှုအစုရှယ်ယာများသည် S&P 500 တွင်ဖော်ပြထားသောအမြတ်အစွန်းအများဆုံး (အစုရှယ်ယာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ) အချို့ဖြစ်သည်။ Dogs of the Dow ရှိအထွက်နှုန်းအပြာရောင် chip သိုလှောင်မှုနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်.
အဆိုပါ ဤကုမ္ပဏီများအတွက်ပစ္စုပ္ပန်တည်ငြိမ်မှု "တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာပေးစိတ်၏အပြာချစ်ပ်ငြိမ်းချမ်းရေး"ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဘို့, ပုံမှန်အားဖြင့်အတွက်သက်သေပြနေသည် မြတ်များတည်ငြိမ်မှုခိုင်မာသော ဦး ဆောင်မှု၊ ခိုင်မာသည့် ၀ င်ငွေနှင့်တိုးတက်မှုတို့ကိုတသမတ်တည်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာအစပျိုးမှုများကိုခိုင်မာစွာဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းစသည့်အခြားနယ်ပယ်များဖြစ်သည်။
S&P 500 ၏ခွေးများနှင့်ပိုမိုသောအရာများအတွက်အဆင့်မြှင့်မှုများအတွက်အောက်တွင်စာရင်းသွင်းပါ။
၀ င်ငွေတိုးတက်ခြင်း၊ ခိုင်မာသောသမိုင်းဝင်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်များ၌စိတ်ငြိမ်သက်မှုရရှိရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် Durig's S & P 500 အစုစု၏ခွေးများ အပြာရောင် chip ခွဲဝေအစုရှယ်ယာများနှင့်အတူအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြည့်ရှုပါ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊.
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရလိုပါက Durig's S & P 500 အစုစု၏ခွေးများ, မခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး ရေ at (971) 327-8847, ဒါမှမဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ info@durig.com.
ခွငဖြေ - အတိတ်ကစွမ်းဆောင်ရည်ကအနာဂတ်အောင်မြင်မှုရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ ပြသထားသောမည်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်မဆိုဤထုတ်ဝေမှုသည် ၉-၁၁-၁၉ တွင်ဖြစ်သည် * အသုံးပြုခဲ့သည့်အခြေခံစံနှုန်းမှာ S&P 10 TR Idx ဖြစ်သည်။ ဒီသုံးသပ်ချက်တွင် Durig Capital မှတင်ပြသောအထွက်နှုန်းမြင့်မားသောနည်းဗျူဟာများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ၎င်းသည် Durig Capital မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များမဟုတ်သကဲ့သို့လုံခြုံရေး ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်အတွက်တိကျသောထောက်ခံချက်လည်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သင့်တော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်မချမီမှတ်ပုံတင်ထားသောပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုတောင်းခံသင့်သည်။